Jis G3444 Round Steel Sodina
Outside savaivony (MG): 21.7-1016.0
Wall hateviny (MG): 2.0-22
Length: 1m-12m na namboarina halavan'ny
Ambony fitsaboana: mainty, sary hoso-doko, nandrisika, sns
Mifarana: tani-hay, na threaded roa farany amin'ny plastika iray farany Cap iray efa voavitrana farany
Fonosana: in fehin'aina, na voahodidina lamban-porofo amin'ny rano PVC lamba.
Shipping .: ampahany na amin'ny fitoeran entana.
Payment: T / T, L / C, andrefana firaisana
Applications: structure, rano, entona sy ny sisa.
Table 1. zavatra simika
Mariky ny kilasy
0.30 ny 1,30
Notes a) Raha ilaina, alloying zavatra hafa tsy voalaza ao io mba homena latabatra. b) Fa ny fantsona ny kilasy STK540 indrindra amin'ny rindrina 12.5 mm ny hatevin'ny, ny zavatra simika mety ny hanekentsika ny aggreement eo amin'ny nividy sy ny mpanamboatra.
Tensile hery N / mm²
Fotoana vokatry ny porofo fihenjanana N / mm²
Tensile hery Weld faritra N / mm²
Distance eo amin 'ny takelaka (H)
Ampiharina ivelan'ny savaivony
Ivelany rehetra diameters
NOTE 1 D io ny ivelany latabatra no savaivony ny fantsona. NOTE 2 1 Nmm² = 1MPa
Previous: EN10219Round vy sodina